Iindawo Ezininzi Ezibonakalayo - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Iindawo Ezininzi Ezibonakalayo
Iindawo ezininzi ezibonakalayo okanye iCape Genet [Genetta tigrina]
Genet enkulu-Spotted ine-height mm e-210 mm, kodwa le ntlobo imfutshane imilenze. Umzimba odibeneyo ude ubude be-460 mm kunye nobukhulu be-1.6 kg. Umsila onobukhulu, omnyama nomhlophe unomthi u-400 mm. Amanqabana afutshane, athathwe ngokukhawuleza kwaye ancedisa ukunyuka. Ayikho into eyenziwa ngokwesondo. Iindonga zeendawo eziqhenqileyo ezifakwe ngamathandle amnyama zimboza i-brown okanye i-tan engaphezulu.
Amathongo amnyama adibanisa kwimigca entanyeni. Isisu sisilumhlophe. Zineembalo ezimhlophe ezijikeleze umlomo, impumlo kunye neephantsi kwamehlo. I-Genet enkulu enokuthi idideke kunye neGenet-Small-Spotted Genet, umbahluko ophezulu ube ngumsila omhlophe obanjwe umgca wokugqibela othe wafaniswa nomsila omnyama onotyiweyo. Olunye umehluko yindawo epheleleyo emnyama yendalo encinci ebonakalayo engenakwiziko eliqhenqileyo.
Ubuninzi bokutya kwayo luqulethwe ngamagundane kunye nezinye izilwanyana ezincinci ezinjengezinambuzane, kanti iintaka, iinyoka kunye nama-amphibians zixhaphake. Iintsholongwane zenza iincinci ezincinane zokutya kwayo. Kuya kudla izityalo.
Ngokuqhelekileyo ukuzalanisa kwenzeka ngexesha leentsuku ezifudumeleyo. I-Genet enkulu ekhutshweyo inika umyinge wabantwana abathathu nge-litter emva kwexesha lokunyuka kweentsuku ezingama-70. Izibonakaliso kukuba abancinci bahlala ezihlalweni, ezenziwe ngaphantsi komhlaba, de kube zikhulile.
Le yintsimi yodwa, yenzeke kuphela kumaqela ngexesha lexesha lokukhula. Iindawo ezikhethiweyo kunye neendawo ezityilisiweyo zikhethiweyo zindawo zokuhlala, ikakhulukazi amahlathi kunye neziqithi ezivaliweyo. Ezinye izityalo ezininzi zokukhusela kunye nokusondela kwamanzi ziyimfuneko ebalulekileyo yokuhlala.
I-Genet enkulu echanekileyo isasazwa eMzantsi Afrika ukusuka kunxweme elisenzantsi nempuma, iKwaZulu-Natali, eMpumalanga, kwiPhondo eliMntla kunye nokwandisa kumazwe angomakhelwane.
Ukutya kwabo kuyahluka kwaye baziwa ukuba bathathe ingca ebasiza ekuguleni kwabo kunye nokunyanzelisa ukuhlanza ukuze baphule ama-toxins abaye bawafaka